यो छ सर्वश्रेष्ठ मोबाइल स्लट बिल डिजाइन र तपाईं कि एसएमएस विकास. यो एक लटरी छ – तत्काल नगद पुरस्कार प्रदान गर्ने क्षमता छ भनेर THEMED खेल. पासा र रंग ब्लक मिलेर, यो सर्वश्रेष्ठ मोबाइल स्लट एसएमएस बिल ग्राफिक्स र गेमप्लेको सर्तहरू दुवै एक व्यवहार छ.
नगद बस्टर विकासकर्ता बारे
तत्काल विन गेमिङ, यसलाई तत्काल पुरस्कार संग खेल डिजाइन र विकास गर्न आउँदा जो जुन kinase उद्योग नेता रूपमा लोकप्रिय ज्ञात. आफ्नो खेल सरल अझै भिन्न छन्. तिनीहरूले लटरी अनलाइन खेल यस्तो प्रकार प्रदान मा एक दशक अनुभव छ. यी दुनिया भर लटरी खेलाडीहरू मायाको छन्.
सर्वश्रेष्ठ मोबाइल स्लट एसएमएस बिल नियमित स्लट खेल बाट राम्रो ब्रेक छ. खेलाडी प्रतिशतमा फिर्ती छ 85.30. यो लटरी खेल आउँदा यो रूपमा स्लट रूपमा राम्रो छ, तर धेरै सभ्य छ. यहाँ तपाईँले पुरस्कार जम्मा गर्न रोलिङ गर्ने पासा सेट गर्न. तपाईं आठ संभावना त्यसो गर्न प्राप्त. स्क्रिनको दायाँ ग्रिड मा रङ्गिन ब्लक पछि यी पुरस्कार लुकेका छन्.
यो पासा अप स्क्रिनमा तपाईं को सामने एक रंग अनुहार देखाउन परिणाम रोलिंग सेट गरिएको छ. कि रंग मिल्ने ब्लक नष्ट छन् प्रत्येक रोल एक रंग ल्याउन र. एउटै रंग को कुनै पनि आसन्न ब्लक पनि नष्ट गर्दै. यी नष्ट ब्लक प्रत्येक एक लुकेका पुरस्कार प्रकट. तपाईंको उद्देश्य सम्बन्धित एक तत्काल पुरस्कार छ यस्तो ब्लक नष्ट गर्न छ. तपाईं त्यसो गर्न सक्षम छन् भने, तपाईं एक तत्काल विजय सम्मानित छन्. साथै, तपाईं पुरस्कार संग सम्पूर्ण पङ्क्ति भरने भने, तपाईं पुरस्कार प्राप्त. यसबाहेक, तपाईं पुरस्कार तपाईं अतिरिक्त पासा रोल एक ब्लक नष्ट अन्त हुन सक्छ.
यो सर्वश्रेष्ठ मोबाइल स्लट एसएमएस बिल एक mindless अझै मनोरंजक खेल खेल्न लालसा खेलाडीहरूको लागि प्ले पर्छ. बुझ्न सरल, हेर्न ठूलो, पुरस्कार तत्काल पुरस्कार यसलाई नै विधा को खेल बाँकी देखि बाहिर खडा गर्ने तीन सुविधाहरू छन्. तपाईंले यसलाई कम्तिमा एक पटक एक अद्भुत खेल यो के हो थाहा खेले.